Health & Sickness - Dana-Tatopani.com | Dana-Tatopani.com
Blood pressure |Tara Koirala
मधुमेह अर्थात चिनी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ? रोग लागेपछी के गर्ने ? रोग लाग्न नदिन यसो गर्नुहोस
चीनका डाक्टर फेरी मिडियामा Dr.Ramesh Aacharya
ग्यास्ट्रिक (acid reflux) बारेमा जान्नै पर्ने २० कुरा Dr. Kalyan Subedi
टाउको दुख्ने समस्या (माईग्रेन/migraine) Dr. Kalyan Subedi-
के हो पिनास, कसरी बच्ने ? यस्ता छन् डाक्टरले दिएका सुझाव –
पिनास :पिनास भन्नाले नाकको भित्री भागमा रहेका खाली ठाउँमा अवरोध भएर श्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्‍याउने एक किसिमको रोग हो । जसलाई साइनोसाइटिस पनि भनिन्छ । साइनोसाइटिस साइनस(sinus) हरुको इन्फ्लामेसन (Inflammation) हो । साइनस भन्नाले टाउँको र अनुहारको हाडहरुमा हुने हावा भरिएका खाली भागहरु हुन् ,जो साना–साना प्वालहरु, ओस्टियमको माध्यमबाट नाकको श्वासप्रश्वास मार्गसँग जोडिएका हुन्छन् । जब कुनै व्यक्तिलाइ रुघा तथा एलर्जी हुन्छ, अनि यी साइनसमा सिगाँन भन्ने तरल पदार्थ भरिन्छ र त्यहाँका पातला